काठमाडौंमा अलपत्र परेका कामदारहरुकाे राेदन : ‘न खान दिन्छ, न आफ्नो घर जान दिन्छ’ | Samacharpati काठमाडौंमा अलपत्र परेका कामदारहरुकाे राेदन : ‘न खान दिन्छ, न आफ्नो घर जान दिन्छ’ – Samacharpati
काठमाडौंमा अलपत्र परेका कामदारहरुकाे राेदन : ‘न खान दिन्छ, न आफ्नो घर जान दिन्छ’
काठमाडौं, ३० चैत । काठमाडौंको कन्ट्रक्सन साइटमा मानिसको भिड मेला लागे सरह छ । ति अधिकाशं काम गर्ने कामदारहरु हुन् ।लगातारको लकडाउनका कारण खान नपाउने अवस्था आएपछि कामदारहरु घर जान खोजिरहेका छन् । कोही नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बताउँछन त कोही वीरगञ्ज । रौतहट र सर्लाहीतिर पुग्नेहरु पनि हातमा जेब्रा झोला बोकेर उभिइरहेका छन् ।
उनीहरु सबै मालवाहक ट्रकले लिफ्ट देला कि भन्ने आशामा अनुरोध गरिरहेका छन् । यो शुक्रबार रातिको दृश्य हो । तर, ट्रक चालकको आफ्नै दुःख छ । ‘प्रहरीले रोकेर लाठी हान्छ, जहाँबाट चढाएको होस्, उही छाड्दे भनेर हप्काउँछ’ चालकले भन्दै थिए ।
‘काठमाडौंमा खाना नपाएपछि कहाँ जानु ? हामी प्रहरीलाई अनुरोध गर्छौं । तपाईंलाई समस्या पार्दैनौँ ?’ लिफ्ट मागिरहेका मजदुरहरु अनुनयविनय गर्छन् । उनीहरुको कुरा काट्दै ट्रक चालक फेरि बोल्छन्, ‘सम्झनुस् न यार, हामीलाई गाह्रो हुन्छ । सधैं यही बाटो हिड्ने हो, भोलि फेरि पुलिसले तङ गर्छ ।’
चालक बोल्दै गर्दा अर्का मजदुर बोले, ‘कस्तो सरकार यार, न काठमाडौंमा खान दिन्छ, न आफ्नो घर जान दिन्छ ।’ त्यही भिडमा रहेका बर्दियाका एक युवकले आफ्नो कथा यसरी सुनाए, हामी चार जना काठमाडौं आएको १० दिन मात्रै भएको थियो भने काम सुरु गरेको पाँच दिन । कन्ट्रक्सन साइटमै बसेका थियौँ । तर लक डाउन सुरु भइगयो ।
ठेकदार इन्डियन थियो । लकडाउन सुरु नहुँदै ऊ घर गयो । हामी मारमा पर्‍यौँ । कमाउन आएको काठमाडौंमा घरबाट पैसा बोकेर आउने कुरा भएन ।
त्यसैले केहीदिन सरसापट गरेर चलायौँ । तर, कति दिन थेग्नु ? जति कुर्दा पनि लक डाउन खुलेन । भोकले मरिएला जस्तो भयो । त्यही भएर घर जान लोकन्थलीबाट हिँडेका हौँ ।
नागढुंगा आइपुग्दासम्म बाटोमा धेरै प्रहरीले सोधपुछ गरे । हामीले समस्या बतायौँ । कुनै ठाउँका प्रहरीले पानी दिएर पठाए भने कुनै ठाउँको प्रहरीले सरकारको नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै लाठीले हिर्काए । तर, हामीसँग अर्को विकल्प थिएन । जसोतसो गर्दै यहाँ आइपुग्यौँ । काठमाडौं यात्रा त हाम्रा लागि ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ भनेझैँ भयो ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै पक्षसँग छलफल गर्दै के होला त निर्णय ?
काली पुर्व आँखा लाउने हो भने कुमाउ र गढवाल चाहियो, मोदीलाई झु_काएर यसरी बनाउने हो ग्रेटर_नेपाल
दाङमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढ्दै
नेलम्बोद्वारा विद्यालयलाई युरोगार्ड प्रदान